अंग्रेजीमा मास्टर्स सुष्मा बीमा पढाउँदै, व्यापार गर्दै – Insurance Khabar
अंग्रेजीमा मास्टर्स सुष्मा बीमा पढाउँदै, व्यापार गर्दै
प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७६, मंगलवार १३:१५
सुष्मा खनाल, एडिओ, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स
सुष्मा खनाल पेशाले बीमा अभिकर्ता हुन् । एक वर्षअघि जीवन बीमा अभिकर्ता पेशामा जोडिन पुगेकी सुष्मा अहिले रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा एडिओका रुपमा कार्यरत छिन् । विद्यालय वा कलेजमा विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यक्रम पढाउने अध्ययन गरेकी सुष्मा अहिले बीमाको बारेमा बुटवल र आसपासका सर्वसधारणहरुलाई बीमाबारेमा जनचेतना जगाउँदै व्यापार गर्दै आएकी छिन् । बीमाका फाइदा र लाभका बारेमा जनतालाई कन्भिन्स गराएर बीमा गर्नु र त्यसैबाट आयआर्जन गर्नु अहिले उनको पेशा बनेको छ । आफ्नो अनुकूल समयमा काम गरेर पनि मनग्य काम गर्न पाइने पेशा भएकोले पनि बीमा अभिकर्ता सुष्माको लागि घरधन्दा शिक्षण अनि पेशा व्यवसाय सबथोक हुन पुगेको छ ।
२०४९ सालमा पाल्पामा जन्मिएकी सुष्मा अहिले बुटवलमा बस्छिन् । सुष्मा शिक्षा अंग्रेजी विषयको मास्टर्स डिग्री होल्डर हुन् । श्रीमान व्यापार–व्यवसाय सम्हाल्ने । सुष्मा आफुलाई पनि केही गर्ने इच्छा त थियो । तर छोरा सानै भएकाले गर्दा उनी घरमै बस्न बाध्य थिईन् । चुल्होचौकामा बाँधिएर यसै आफ्नो समय खेर फाल्न उनलाई मन थिएन । अंग्रेजी विषयको मास्टर्स डिग्रीको सर्टिफिकेट हातमा भएर पनि के जागिर गर्ने ? भन्ने विषयमा अन्यौलमा थिईन सुष्मा । परिवारलाई पनि समय दिन सकिने, आम्दानी पनि हुने खालको रोजगार चाहिएको थियो सुष्मालाई ।
घर धन्दामै रम्दै आएकी खनाललाई श्रीमानले जीवन बीमा अभिकर्ता बन्ने सल्लाह दिए । श्रीमानका साथी रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स बुटवलका ब्राञ्च म्यानेजर थिए । श्रीमानकै सल्लाहामा उनी रिलायन्स लाइफ पुगिन् । रिलायन्स लाइफबाट सुष्माले बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स हात पारिन् । उनलाई सुरुदेखि नै बीमा क्षेत्रमै केही गरेरै छाड्छु भन्ने अठोट मनभित्रैदेखि पलायो ।
सुष्माले सोचेको र खोजेको जस्तो पेशा बल्ल पाइन । जीवन बीमा अभिकर्ता पेशामा जोडिनु पूर्व अभिकर्ता पेशाबाट पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने खनाललाई कुनै जानकारी नै थिएन । बीमा अभिकर्ता पेशामा आवद्ध हुनुपूर्व आफुलाई अभितकर्ता पेशा के हो ? यसबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ ? भन्ने केही जानकारी नभएको अनुभव सुनाउछिन् । विगत सम्झदै खनालले सुनाईन्, “यस पेशामा आए पछि स्वरोजगार भए, आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने खर्च जोहो गर्न सक्ने भए ।”
अभिकर्ता पेशामा प्रवेश गरेपछि सुष्माको जीवनमा धेरै परिवर्तन आए । अभिकर्ता पेशामै जोडिएपछि पब्लिक रिलेशन बढ्यो, आम्दानीको स्रोतको दायरा पनि फराकिलो भयो । सबै खालका मानिसहरुसँग पनि जनसम्पर्क बढ्यो । घर व्यवहारमै अल्झिएको उनको दैनिकिमा अब समाजसेवी, बीमा अभिकर्ता मार्केटिङमा परिवर्तन भयो ।
बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स हात पारेपछि सुष्माले शुरुको बीमा आफ्नै सन्तानको गरिन् । आफु अभिकर्ता पेशामा आउनुअघि नै आफ्नो सन्तानको बीमा गर्न उत्सुक रहेकी सुष्माले अभिकर्ता पेशाको लाइसेन्स लिएपछि सो उत्सुकता आफै अभिकर्ता भएर पूरा गरिन् । ‘म आफै यस पेशामा जोडिनु अघिदेखि नै मलाई अभिकर्ताहरुले बीमाको प्रस्ताव लिएर आएका थिए । तर आफै बुझेर मात्रै बीमा गर्छु भन्ने जवाफ दिन्थे ।’
त्यसपछिका दिनमा पनि बीमा गर्दा पनि खासै गाह्रो नभएको बताउने सुष्मा भन्छिन्, “बीमा बुझाउन त्यति सजिलो त छैन्, तर पनि निरन्तर रुपमा लागि परेर काम गर्दा यो पेशामा सफल भइन्छ र सफल भएकाहरु पनि छन् ।” बीमा प्रस्ताव लिएर बजारमा जाँदा विभिन्न खालका उतार–चढावहरु पनि आउने गर्छन् उनले विगत सम्झदै आफ्नो अनुभव साटिन् ।
एउटा बीमा पोलिसी बेच्न नै लामो समयसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने पेशा भएकाले यो पेशामा धैर्यता चाँहिने कुरामा उनले जोड दिईन् । ‘बीमा चेतना भएकाले पनि सहजै रुपमा बीमा गर्न चाहाँदैनन्’ उनले अनुभव साटिन् । सुष्मा बीमा व्यवसायप्रति आफै बीमा बुझ्न र अरुलाई पनि बीमाको आवश्यकता बुझाउने लक्ष्यसाथ प्रवेश गरेकी थिईन । शरुमा त उनलाई बीमाप्रति केही ज्ञान नै थिएन । तर जब उनी आफ्नै श्रीमानको प्रेरणाले रिलायन्स आईन तव खनाल बीमा बारे प्रष्ट भईन ।
‘बीमा अभिकर्ता बीमा कम्पनी र बीमितकाबीच मध्यस्थकर्ताको रुपमा काम गर्ने व्यक्ति हो ।’ उनले भनिन् । बीमा अभिकर्ता भनेको बीमा कम्पनी र बीमितको बीचमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हो । ‘अभिकर्ता पेशा आर्थिक रुपमा सबल हुने र सामाजिक पेशा हो । बीमा अभिकर्ता बीमा कम्पनी र बीमितहरुको बीचमा पुलको रुपमा रहेर काम गर्ने सम्मानित पेशा हो ।’ उनले भनिन् ।
एउटा असल बीमा अभिकर्तामा धेरै गुणहरु हुनुपर्ने उनको तर्क छ । मेहनती, इमान्दार, सहनशीलता, धैर्यता, लगनशिलतालगायतका गुणहरु मुख्य रुपमा बीमा अभिकर्तामा हुनुपर्ने सुष्माको धारणा छ । बोलिमा पक्कापन, नआत्तिने साथै बुझाउन सक्ने क्षमता अभिकर्तामा हुनुपर्ने उनको अनुभव छ । यीनै विभिन्न गुणहरु कै कारणले गर्दा नै होला आज सुष्मा यो पेशामा सफल छिन् ।
बीमा अभिकर्ताको पेशामा जोडिएकी सुष्मासँग बीमा गराउँदाका रमाईला अनि सम्झन लायकका पलहरु पनि छन् । एक जनाको बीमा गराउन जाँदा दुई जनाकै बीमा गराउन पाएर फर्कदाको क्षणले अझै प्रेरणा दिइरहेको छ । तीनै पलहरुलाई आफ्ना ज्ञान र अनुभवलाई सामेल गर्दै अभिकर्ता पेशामै रहेर अघि बढ्ने उनको लक्ष्य छ ।
ह्वाईट हाउस अगाडि विध्वंश, राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बंकरमा लुकाइयो, अमेरिकी बीमा कम्पनीमाथि अर्बौको भार
उद्योग प्रतिष्ठानको बीमा पोलिसी लकडाउन अवधीभर थप गर्न गृहकार्य
बाँकेमा बस दुर्घटना, १२ को मृत्यु